Sazy nihamafy : Tsy mahazo manondrana andramena i Madagasikara | NewsMada
Sazy nihamafy : Tsy mahazo manondrana andramena i Madagasikara
Tsy nahatratra ny tanjona indray! Nohamafisin’ny Rafitra iraisam-pirenena mitantana ny varotra iraisam-pirenena ny biby sy zavamaniry ahina ho lany tamingana (Cites), ny tsy fahafahan’i Madagasikara manondrana ny hazo sarobidy. Tinapaka izany nandritra ny fivoriambe faha-69 natao tany Geneve ny 27 novambra-1 desambra teo.
Voakasik’izany ny andramena, ny voamboana ary ny volombodimpona (ébène).
Maromaro ny fepetra napetraky ny Cites tamin’ny fitondrana tsy maintsy tanterahina raha hiala amin’ny sazy. Anisan’ny tena misongadina amin’izany ny fanenjehana ireo mpanao trafika nanondrana andramena tany ivelany, ny fitantanana ny tahiry andramena nogiazin’ny fanjakana.
Tsy nisy voasazy ny mpanao trafika
Tsy nisy tratra ny ankamaroan’izy ireny, fa fihetsiketsehana sy fisehosehoana ny betsaka. Hanamarinana izany, nankatoavin’ny antenimiera ny lalàna manangana ny fitsarana manokana ho an’ny andramena. Tsy nisy asa nataony na iray aza, tsy misy mpikambana ao aminy ary tsy hita intsony ny tohiny. Maro ireo olona voarohirohy amin’ny trafika andramena, ananan’ny Bianco antontan-taratasy, tsy nisy voasazy na iray aza, ary efa miriaria ny ankamaroany.
Mikasika ny fitantanana ny andramena giazan’ny fanjakana, bolabola ampahany vitsy , manodidina ny 27.000 lazaina fa amin’ny 200.000 ny voaisa any Analanjirofo sy Sava. Tsy nisy tohiny fa very an-javony koa ny asa.